चीरन पुनको देशभक्तिपूर्ण गीत ‘नरुनु आमा’ को भिडियो सार्वजनिक::Online News Portal from State No. 4
चीरन पुनको देशभक्तिपूर्ण गीत ‘नरुनु आमा’ को भिडियो सार्वजनिक
कानुन छ भन्छन् दिनै चेली बलात्कार खै रोक्न आज सकेको ?
बागलुङ, १५ असोज – नेपाली गीतसंगीतका चर्चित कलाकार चिरन पुनको देशभक्तिपूर्ण गीत ‘नरुनु आमा’ को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । बढ्दो हत्या, अपहरण, कालावजारी, बलात्कार, भ्रस्टाचार, बेरोजगारी कम गर्न र यि कुराहरुको प्रतिरोध गर्ने शन्देसमुलक गीत म्युजिक नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट सार्बजनिक भएको हो ।
यस गीतको शब्द रचना तथा संगीत युबा नेता तथा कलाकार चिरन पुनको रहेको छ भने सुनिता थिङको गायन छ । संगीत संयोजन आशिस अबिरलले गरेका छन। कानुन छ भन्छन् दिनै चेली बलात्कार खै रोक्न आज सकेको ? सरकार छ भन्छन् लाखौ युवा विदेशिए खै छेक्न आज सकेको ? यो कस्तो कानुन हो ? यो कस्तो सरकार हो ? निर्मला पन्तको बलत्कारी पछि हत्या गरेको २ महिना बिती सक्दा पनि दोसिलाई कारबाही नभएको कन्चनपुरको यस घट्ना सेलाउन नपाउदै फेरी पोखरामा १० बर्सिय श्रीया सुनारको बलत्कार पछि हत्या भयो । बलात्कार सम्बन्धी समाचार नआएको दिन हुँदैन ।
देशमा कानुन पनि छ सरकार पनि छ तर न्याय भने छैन । लाखौं युबा हातमुख जोड्न बिदेसिएका छन । एउटा सपना र सहास बोकेर जहाज चढेर बिदेसिएका तिनै युबा लास बनेर बाकसमा स्वदेश फर्किरहेका छन, तर सरकार रमिता हेरीरहेका छ्न । यस्तै छ देशको हालत छ । नेपाली वास्तविकलाई गीत मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ ।